Diinta Zoarastrianism – Kaasho Maanka
Qaybta: Diinta Zoarastrianism
Diinta Saraadishtiyadu waa mid ka mid ah Diimaha soo jireenka ah ee ku dhisan in Ilaah keliya jiro, oo isaga loo yahay addoomo kaas, oo la dhaho Ahurmasda. Da' ahaan waxay jirtay saddex kun oo sanno in ka badan. Waxaa asaasay Saraadish nin la odhan jiray. Dadka haysta diintan waxay u arkaan dabka inuu yahay astaan barakaysan, oo aanay ahayn in aanu mar qudha bakhtiyin. Dabku waa xikmad ilaah oo...
Maxaad ka taqaan Diinta Zoroastrianism, Maxayse wadaagaan Islaamka?
Qaybta: Diinta Islaamka, Diinta Zoarastrianism, Sooyaal
Diinta Zoroastrianism ama loo yaqaan Majuusiyadda waa diin aaminsan in baryada iyo cibaadada kaleba gaar u tahay Ilaahay oo ayna bannaanayn in cid kale lala wadaajiyo, dabku calaamad ayuu u yahay ilaahooda Ahura Mazda laakiin ma caabudaan sida dad badani moodayaan. Waxaa lagu tiriyaa diimihii ugu horreeey ee dadku sameeyeen, waxayna jirtaa in ka badan 3000 sano, waxay ka horraysay dhamaan diimaha...